EF-650/850/1100 Mpempe akwụkwọ nchekwa akpaaka
EF-650/850/1100 Mpempe akwụkwọ nchekwa akpaaka
Ọsọ ahịrị 450m
Ọrụ ebe nchekwa maka ịchekwa ọrụ
Ndozi efere akpaaka site na moto
20mm etiti maka akụkụ abụọ maka ịgba ọsọ kwụsiri ike dị elu
Oke mpempe akwụkwọ kacha
Nha mpempe akwụkwọ kacha nta
Mpempe akwụkwọ ọdabara
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ 250g-800g;Akwụkwọ mgbịrịgba F, E
Ọsọ eriri kacha
Akụkụ ndekọ akụkụ
Ngalaba mpịachi tupu
ngalaba mkpọchi okuku
Nkeji gluing dị ala n'akụkụ aka ekpe
Obere gluing unit n'akụkụ aka nri
Ngwaọrụ grinder nwere uzuzu uzuzu
Sistemụ gluu oyi HHS 3
Akụkụ mpịachi na mmechi
Ngalaba Pneumatic Press
Ngwaọrụ 4 & 6
Ngalaba Trombone Servo Driven
Mkpọchi ngwaọrụ squaring ala na ebufe
Pneumatic square ngwaọrụ na ebu
Ngwa obere igbe
LED ngosi mmepụta
Ọwa ọpụpụ na trombone
Main ihuenyo mmetụ na graphic imewe interface
Extra feeder na eriri ebu
Njikwa anya wee chọpụta
Usoro Plasma nwere egbe 3
24 Ọrụ ebe nchekwa iji chekwaa ọrụ ugboro ugboro
25 Ngwaọrụ mgbaka na-abụghị nko
26 Ihe mgbochi ọkụ na ngwaọrụ nchekwa
27 Ngwaọrụ ntụgharị ogo 90
28 Mgbakwụnye teepu nrapado
29 Igwe nrụbama ọpịpị sitere na Japan NSK √
30 KQ 3 gluu usoro na elu mgbali mgbapụta
1) Ngalaba nri
Ngalaba feeder nwere sistemu mbanye moto nọọrọ onwe ya wee na-ejikọ ya na igwe isi.
7 pcs nke eriri nri 30mm na efere ọla 10mm ịkwaga n'akụkụ ka ịtọ obosara.
Ihe mkpuchi ahụ embos na-eduzi eriri nri.Uwe elu akụkụ abụọ dabara na nhazi ngwaahịa.
A na-eji agụba nri atọ kwadebere ngalaba nri ka ọ gbanwee dịka nlele ngwaahịa si dị.
Ngwaọrụ na-eme mkpọtụ na-edobe akwụkwọ nri ngwa ngwa, dị mfe, na-aga n'ihu na akpaghị aka.
Ngalaba nri nwere ịdị elu 400mm yana ngwaọrụ mgbochi uzuzu ahịhịa na-eme ka nri akwụkwọ dị mma.
Onye na-arụ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ mgba ọkụ nri n'akụkụ igwe ọ bụla.
Enwere ike ịkwado eriri eriri nri na ọrụ aṅụ (Nhọrọ).
Nleba anya nke onwe nwere ike nyochaa arụmọrụ na ọdụ igwe.
2) Akụkụ ndekọ aha
Enwere ike imezi akwụkwọ sitere na ngalaba nri na ngalaba ndebanye aha n'akụkụ iji hụ na nri ziri ezi.
Enwere ike ịhazigharị nrụgide ebugharị elu na ala ka ọ dabara na ọkpụrụkpụ osisi dị iche iche.
3) Ngalaba mpịachi tupu
Nhazi pụrụ iche nwere ike buru ụzọ tinye ahịrị mpịachi nke mbụ na ogo 180 na ahịrị nke atọ na ogo 165 nke nwere ike ime ka igbe dị mfe imeghe.Sistemụ mpịachi nkuku 4 nwere teknụzụ servo-motor nwere ọgụgụ isi.Ọ na-enye ohere mpịachi ziri ezi nke azụ azụ niile site na nko arụnyere n'ogwe abụọ kwụụrụ onwe ya nke a na-ejikwa eletrọnịkị.
4) Mkpọchi okuku ngalaba
Mpịakọta mkpọchi-ala na imewe na-agbanwe agbanwe na ọrụ ngwa ngwa.
Enwere ike mechaa okuku-ala yana ngwa ngwa anọ.
20 mm eriri elu na 30mm eriri ala.Efere nke dị n'èzíenwere ike ịhazigharị elu na ala ka ọ dabara na ọkpụrụkpụ osisi dị iche iche site na sistemụ cam.
5) obere gluu unit
Achịkọ aka ekpe na aka nri nwere wheel gluu 2 ma ọ bụ 4mm dị.
6) ngalaba mpịachi na mmechi
Ahịrị nke abụọ bụ ogo 180 na ahịrị nke anọ bụ ogo 180.
Enwere ike ịhazi atụmatụ pụrụ iche nke mgbanaka mgbanaka mgbanaka n'otu n'otu iji dozie ụzọ ịgba ọsọ igbe ka ọ kwụ ọtọ.
7) Mgbanwe moto
Enwere ike ịhazi mmezi moto iji nweta mmezi efere mpịachi.
8) Ngalaba Pneumatic Press
Enwere ike ịmegharị ngalaba elu azụ azụ na-adabere n'ogologo igbe.
Ndozi nrụgide pneumatic iji dobe nrụgide otu.
Enwere ike itinye sponge pụrụ iche na akụkụ concave pịa.
Na akpaaka mode, ọsọ nke pịa ngalaba na-emekọrịta ihe na isi igwe na-ebili agbanwe agbanwe nke mmepụta.
9) 4 & 6-akuku ngwaọrụ
Yasakawa servo sistemu nwere modul ngagharị hụ na nzaghachi ọsọ dị elu dabara na arịrịọ ọsọ dị elu.Ihuenyo mmetụ nọọrọ onwe ya na-eme ka nhazi ahụ dị mfe ma mee ka ọrụ dịkwuo mfe.
10) Servo Driven Trombone unit
Jiri akwụkwọ “kicker” were were were were were na-agbakọ ọnụ ma ọ bụ fesa ink ọnụ.
Igwe nyocha jam.
Elu eriri na-agba ọsọ na nnyefe na-arụ ọrụ.
Otu dum na-eji moto servo nọọrọ onwe ya na-anya maka mmezi nke etiti igbe dị ka ọchịchọ.
11) Mkpọchi ngwaọrụ squaring ala na ebufe
Ngwaọrụ nwere ike hụ na square igbe corrugated nke ọma nwere mgbanwe ogologo eriri ebufe moto.
12) Pneumatic square ngwaọrụ na ebu
Ngwa pneumatic square nwere ihe ebu abụọ na ebu nwere ike hụ na igbe katọn nwere ọdịdị obosara ma na-emighị emi iji nweta square zuru oke.
13) Ngwa minibox
Ihuenyo mmetụ isi nwere interface imewe eserese maka ịrụ ọrụ dị mma.
14) Main ihuenyo mmetụ na graphic imewe interface
15) Ọrụ ebe nchekwa iji chekwaa ọrụ ugboro ugboro
Ihe ruru ụdị 17 nke servo moto na-eburu n'isi wee chepụta nha nke efere ọ bụla.
Ihuenyo mmetụ nọọrọ onwe ya na-akwado ịtọ igwe n'ime nha ụfọdụ megide usoro echekwara ọ bụla.
16) NA-enweghị nko okuku ala ngwaọrụ
Site na mkpọda imewe pụrụ iche, ala igbe nwere ike daa na oke ọsọ na-enweghị nko.
17) Ihe mgbochi ọkụ na ngwaọrụ nchekwa
Ihe mkpuchi igwe zuru oke tufuo ohere nke mmerụ ahụ.
Ihe mgbochi ọkụ Leuze, mgba ọkụ ụdị latch yana mgbanaka nchekwa na-emezu arịrịọ CE site na imewe sekit anaghị arụ ọrụ.
18) Na-agbanye igwe na-ebugharị si Japan NSK
Igwe NKS zuru oke ka igwe igwe igwe na-eji igwe na-agba ọsọ na obere mkpọtụ na ogologo oge.
Nkọwa na ụdị nke isi akụkụ na ngwa ngwa
Aha Ụdị mmalite
Isi moto Dong Yuan Taiwan
onye ntụgharị V&T Ejikọtara ọnụ na China
Man-Machine interface Nna-ukwu panel Taiwan
eriri synchronous OPTI Germany
V-Ribbed Belt Hutchinson Franch
Na-ebu NSK, SKF Japan/Germany
Isi aro Taiwan
Atụmatụ eriri NITTA Japan
Ngwa eletriki Schneider Germany
Pneumatic AIRTEK Taiwan
Nchọpụta eletriki SUNX Japan
Linear ndu SHAC Taiwan
Sistemụ ọrụ Sanyo Japan
Igwe ahụ na-ewe usoro nnyefe eriri multi-groove nke nwere ike ime mkpọtụ dị ala, ọrụ kwụsiri ike na mmezi dị mfe.
Igwe ahụ na-eji ihe ntụgharị ugboro ugboro iji nweta njikwa akpaka ma chekwaa ike.
The ọrụ onwem na otu nha nha nha nha dị mfe na adaba.Ndozi eletriki bụ ọkọlọtọ.
Ajị na-enye nri na-ejiri ọtụtụ eriri siri ike nwere moto ịma jijiji iji hụ na nri na-aga n'ihu, nke ziri ezi na akpaaka.
N'ihi efere akụkụ nke eriri elu nke nwere atụmatụ pụrụ iche, enwere ike idozi esemokwu belt na-akpaghị aka dịka ngwaahịa si dị kama iji aka.
Nhazi ihe owuwu pụrụ iche nke elu efere abụghị naanị nwere ike ichekwa draịva na-agbanwe nke ọma kamakwa ọ nwere ike zere mmebi n'ihi ọrụ na-ezighi ezi.
Tank gluing dị ala na nhazi nke ịghasa maka ịrụ ọrụ dị mma.
Jiri njikwa ime ime were nweta ihuenyo mmetụ na sistemu njikwa PLC.Ejiri ya na ọnụ ọgụgụ fotocell na sistem akara kicker auto.
Ngalaba pịa na-anabata ihe pụrụ iche yana njikwa nrụgide pneumatic.Ejiri eriri ogbo mee ka ọ hụ na ngwaahịa zuru oke.
Enwere ike ịrụ ọrụ niile site na ngwaọrụ igodo hexagonal.
Igwe nwere ike imepụta igbe kwụ ọtọ nwere mpịachi nke mbụ na nke atọ, mgbidi okpukpu abụọ na mgbachi mkpọka
Okwu mmalite nke nrụpụta
Site na mmekorita ya na onye mmekọ kacha elu n'ụwa, Guowang Group (GW) nwere ụlọ ọrụ nkwonkwo na ndị mmekọ Germany na ọrụ KOMORI zuru ụwa ọnụ OEM.Dabere na teknụzụ German dị elu nke German na Japan yana ahụmịhe karịa afọ 25, GW na-aga n'ihu na-enye azịza mgbasa ozi kacha mma na nke kachasị mma.
GW na-anabata usoro mmepụta dị elu yana ọkọlọtọ njikwa 5S, site na R&D, ịzụrụ, igwe, ịgbakọta na nyocha, usoro ọ bụla na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu.
GW na-etinye nnukwu ego na CNC, bubata DMG, INNSE- BERADI, PAMA, STARRAG, TOSHIBA, OKUMA, MAZAK, MITSUBISHI wdg site n'akụkụ ụwa niile.Naanị n'ihi na ọ na-agbaso ụkpụrụ dị elu.Ndị otu CNC siri ike bụ nkwenye siri ike nke ngwaahịa gị.Na GW, ị ga-enwe mmetụta "dị elu nke ọma na nke ziri ezi"
Nke gara aga: GUOWANG R130Y AUTOMATIC HOT-FOIL STAMPING MACHINE
Osote: NKE GW-P Ọsọ Ọsọ Ọsọ
EFOLD-2100 PCW High Speed ​​Akpaaka nchekwa Gluer
JX-1700 PCW High Speed ​​Akpaaka nchekwa Gluer
JX-2300/2800 PCW Ọsọ ọsọ akpaaka akpaaka Gluer
EFOLD-1500 PCW Igwe nchekwa nchekwa akpaaka dị elu
ZH-2300DSG Semi-Automatic iberibe abụọ katọn Fol...